जुम्ला – MeroJilla.com
प्रहरी मृत्युको हल्ला फैलाएर सरकारले डा. केसीलाई झुक्यायो Thursday, July 19th, 2018
जुम्ला । सरकारले आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउन झुटको सहारा लिएको छ । डा. केसीलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा काठमाडौंतर्फ ल्याइएको छ । काठमाडौं आउन तयार भए पनि डा. केसीले सेनाको हेलिकोप्टरमा नजाने अडान लिएका थिए । तर, झडपका क्रममा घाइते भएका प्रहरीको मृत्यु भएको खबर सुनाएपछि केसी विक्षिप्त भए । उनी रुँदै ‘म काठमाडौं जान्छु’ भन्दै आफैं बेडबाट झरेका थिए..
डा. गोविन्द केसी काठमाडौं आए
काठमाडौं । जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौंतर्फ ल्याइँदैछ । स्थानीय प्रशासनले बल प्रयोग गर्दा भएको झडपमा थुप्रै विद्यार्थी घाइते भएपछि डा. केसी काठमाडौं आउन तयार भएका हुन् । केसी अनसनरत कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा झडपका क्रममा एक जना प्रहरीसमेत घाइते भएका थिए । झडपबाट डा. गोविन्द केसी निकै दुखी भएका छन् । उनले रुँदै ‘म काठमाडौं जान्छु’ भन्दै..
जुम्ला । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीले काठमाडौं ल्याउन रोकेको भन्दै प्रहरीले उनका समर्थकमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेको छ । प्रहरीले अस्पतालभित्रै पुगेर कुटपिट गरेको पीडितहरुले बताएका छन् । डा. केसीलाई लिन डाक्टरहरुको टोलीसहित नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर जुम्ला पुगेको थियो । टोलीलाई सघाउन कणर्ाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र गृहमन्त्री नरेश भण्डारी पनि..
काँग्रेस सांसदको टोली डा.केसीलाई समर्थन गर्न जुम्ला जादै Thursday, July 5th, 2018
जुम्ला- जुम्लामा अनशनरत डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न र उहाँको मागप्रति ऐक्वबद्धता जनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एक प्रतिनिधिमण्डल आज जुम्ला जाने भएको छ । काँग्रेस संसदीय दलको हिजोको बैठकको निर्णय अनुसार कांग्रेसका सांसदहरु सहितको टोली आज त्यस तर्फ जान लागेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो । बैठकले प्रतिनिधिसभा सांसद..
‘वर्षेनि ५ लाख युवा बेरोजगार’ Tuesday, October 10th, 2017
जुम्ला, २४ असोज । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव जीवनकुमार राईले वर्षेनि पाँचलाख नेपाली युवा बेरोजगार हुने गरेका बताएका छन् । ‘कोरिया इन्टरनेशनल को–अपरेशन एजेन्सी (कोइका)’ को वित्तीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालको प्राविधिक सहयोगमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय÷विभागद्वारा आयोजित अभिमुखीकरण गोष्ठीमा उपसचिव राईले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुन नसकेकाले वर्षेनि..
परिचय फेर्दै कर्णाली राजमार्ग, घट्दै सवारी दुर्घटना Wednesday, August 24th, 2016
काशी पोख्रेल बाँके ८ भदौ । मृत्यु मार्गले आफ्नो छवि बिगारेको कर्णाली राजमार्गमा पछिल्ला बर्ष सवारी दुर्घटनामा कमी आएको छ । यो सँगै कर्णाली राजमार्गले आफ्नो परिचय बदल्दै छ । हरेक वर्षझैं ठुला सवारी दुर्घटनामा थुप्रै नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेका समाचारले यो सडकमा यात्रा गर्ने यात्रु त्रसित बनेका थिए । पछिल्ला तीन वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने सवारी..
कर्णालीमा खडेरी, अनाज भन्दा बढी पानीको अभाव भयो Thursday, April 7th, 2016
कर्णाली २५ चैत । पुस्तौदेखि प्रयोग गर्दै आएको पानीको मूल सुकेपछि मुगुको रारा गाविस मुर्मा गाउँका बासिन्दा चर्को समस्यामा छन् । करिब ७० घरधुरी रहेको यो गाउँका बासिन्दालाई खानेकुरा भन्दा घरलाई एक गाग्री पानी लिन रातभर जाग्राम बस्नुपर्छ । “कहिल्यै नसुकेको पानीको मुहान यसपटक सुकेपछि गाउँनै काकाकुल भएको छ,” स्थानयि धनसिंह रोकायाले भने । रुगा गाविसका डेढ सय दलित परिवारलाई..
रोगी खसी भित्रन नदिन जुम्लामा प्राविधिक परिचालन Friday, October 16th, 2015
जुम्ला २९ असोज । दसैँ नजिकीदै गर्दा जुम्लामा खसीबोकाको आयात र निर्यात सुरु भएको छ । आयात र निर्यातको अवस्था जानकारी लिनको लागि जिल्ला पशु सेवा कार्यालय जुम्लाले पशुस्वास्थ्य प्राविधिक खटाएको हो । जुम्लामा बाहिर जिल्लाबाट रोगी खसी नभित्रिउन भन्ने उदेश्यले पशु स्वास्थ्य प्राविधिक खटाएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका पशुविकास अधिकृत गोविन्दबहादुर महतले जानकारी..
कर्णाली राजमार्ग वन्द हुँदा कालिकोट र जुम्लावासी सास्ती ब्यहोर्दै Thursday, October 8th, 2015
जुम्ला २१ असोज । मध्यपश्चिम यातायात व्यवसायी समितिले अनाहकमा दुःख दिएको भन्दै कर्णाली यातायात व्यवसायी संघले यातायात सञ्चालन बन्द गरेपछि कर्णाली राजमार्गमा गाडी डुड्न बन्द भएको छ । कर्णाली यातायात व्यवसायी संघले जुम्लाको बसपार्क, ट्राफिक कार्यालय, कालिकोट जिल्लाको नाग्म र सिजाको गोठिज्युलामा बस तेर्साएर सडक अवरुद्ध पारेको छ । दुई यातायात व्यवसायीको स्वार्थको..
चन्दननाथ नगरपालिका जुम्ला खुल्ला दिशामुक्क्त नगरपालिका घोषणा Saturday, April 11th, 2015
श्याम बि सी जुम्ला २८ चैत । कर्णाली अञ्चलको सबैभन्दा पहिलो नगरपालिका चन्दननाथ नगरपालिकालाई आज एक औपचारिक कार्यक्रम गरि खुल्ला दिशा मुक्क्त गरिएको छ । नगरपालिकाका ९७ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय बनाएर प्रयोगमा आईसकेको हुनाले नगरपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको हो । यसभन्दा अगाडी बजार क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा आएको भनिएपनी केही शौचालय आजैका दिनबाट..
जुम्लामा यस वर्ष २ सय वटा स्याउ बगैचा निर्माण हुने Sunday, February 22nd, 2015
जुम्ला १० फागुन । जुम्लामा यस वर्ष २ सय वटा स्याउ बगैचा निर्माण हुने भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले एक घर एक स्याउ बगैचा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकोले यस वर्ष २ सय वटा स्याउ बगैचा निर्माण हुने भएको हो । स्याउ बगैचा निर्माणका लागि प्रत्येक किसानलाई १ सय ५० वटा स्याउका विरुवा उपलब्ध गराईको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत तेजनारायण गैरले बताउनु भयो । प्रति स्याउका..